Nke a kwesịrị ka a blog post ... Daalụ, Kathy! | Martech Zone
A mgbe gara aga, amalitere m itinye njikọ m kwa ụbọchị na otu blog post na saịtị m. Emere m ya n'ụzọ ahụ maka ebumnuche di na nwunye:
Enweghị m ihe ọ bụla iji gbakwunye na mkparịta ụka ahụ mana achọrọ m ka ndị na-agụ m chọta obere 'ọla' nke ozi.
Achọghị m ichegharị ihe ndị ọzọ derela. Enweghị m ike ịgwa gị otu ọ si ewute ya ma ọ bụ ka m gafere nri 100 na onye na-agụ m tupu iPhone, iPhone, na post-iPhone. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị regurgitation, tụfuo njikọ gị ma mee ya.
Anụbeghị m mkpesa ọ bụla gbasara njikọ ndị ahụ - ihe niile a na-ekwu adịla mma. Enwere m olileanya na ị ga-achọ ụzọ a ka m wee nyefee ozi m na-ewere.
Otú ọ dị, post a dị iche. Enweghị m ike ịkọwa ya na enweghị ederede ọ bụla. Na blọọgụ niile m zoro aka na saịtị m, Ingmepụta Ndị Ọrụ Omiiko bụ nnọọ otu n'ime ndị ọkacha mmasị m.
Nke a bụ ihe atụ dị mfe nke otu blọọgụ a siri dị ike, Kathy Sierra chịkọtara ihe m na-alụ maka ya ma na-arụ ọrụ kwa ụbọchị m na-arụ ọrụ oge niile yana ọhụụ dị mfe abụọ:
Na atụmatụ mmepe:
Na ngwanrọ site na nkwenye:
Ekwuru m na ọtụtụ blọọgụ mana ezere njikọta na ọnọdụ jọgburu onwe ya nke Kathy chọtara. Kathy bụ ebumnuche nke ụfọdụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ ma na-eyi egwu na saịtị ọzọ. Achọghị m itinye okwu na ọnụ Kathy mana ikpe ikpe site na edemede ya, o doro anya na ọ gbanwere ihe niile. Enwere m ike iche n'echiche ihe nke a na-aga ma echiche m na ekpere m bụ nke Kathy.
Kathy na-ahapụ ịde blọgụ n'ihi mgbasa ozi ọ na-eweta. Ọtụtụ mmadụ na-amanye Kathy ka ọ gaa n'ihu na blọọgụ ya mana echeghị m na nke ahụ dị mma. Kathy na-emesapụ aka na blọọgụ ya, ọ dị ịtụnanya. Ọ nwere ike ịdịrịrị ọdịnaya nke blog ahụ na mbipụta ma ọ bụ abụọ Isi nke Mbụ akwụkwọ, kama nke ahụ, e nyere anyị echiche ndị a dị oke egwu n'efu.
Daalụ, Kathy! Ọ bụrụ n ’mgbado anya gị bụ inyere ma ọ bụ ịgbanwe otu onye na blọgụ gị, ihe ịga nke ọma n’ebe m nọ. M na-atụ anya agụụ gị ọzọ! Ọ ga-amasị m ịhụ gị ka ị na-achịkọta ozi niile sitere na blọọgụ gị n'ime akwụkwọ mara mma… ikekwe ị nwere ike ịnweta saịtị ndebanye aha mechiri emechi ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ na-aga n'ihu ma na-enye gị nchekwa ị kwesịrị.
Ikekwe ntuziaka Head Start na Software Product Development na Management? Gbalia itinye ihe onyogho 2 ahụ - ha na-agwa akụkọ niile!
Enweghị ike ikwenye karịa. Blọọgụ Kathy bụ otu n'ime ndị mbụ m debanyere aha na ya, ma gosipụtala na ọ bara nnukwu uru kemgbe ahụ. Echetara m ịgụ ihe na-erughị akụkọ iri na abuo wee gaa “wow” ozugbo nke ahụ gachara. Ọ bụ otu n'ime blọọgụ ndị na-adịghị akwụsị iju gị anya site na omimi na nghọta nke mmekọrịta azụmahịa na ndị ahịa na iji ngwanrọ.
N'eziokwu, ọ na-ewute m nke ukwuu maka onye ọ bụla mere ihe a ma mee ka ihe a kwụsị. Echere m na ihe anyị nwere ike ime ugbu a bụ igwupụta ihe ochie wee mụta, dị ka ihe i mere ebe a.